Brezila : Miatrika Famaky Ny Hazo Tranainy · Global Voices teny Malagasy
Brezila : Miatrika Famaky Ny Hazo Tranainy
MpanoratraPedro Henrique Tavares
Nandika (en) i Natalia Laczko
Voadika ny 15 Avrily 2013 8:18 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Español, Português
Mandrahona ny hihanika sy hipetraka eny ambonin'ireo hazo efa zato taona any atsimon'i Brezila ny mponina any Porto Alegre ho fiarovana azy ireny amin'ny fikapàna azy noho ny tetikasa fanitarana ho fanomanana ny fiadiana ny amboara eran-tany 2014.
Iray amin'ireo tanàna roambinifolo handray ilay voalohany amin'ny hetsika lalao baolina kitra iraisam-pirenena fanao isaky ny efa-taona i Porto Alegre. Fantatra amin'ny hamaitson'ny ravin'ireo hazony efa tranainy eny an-dalambe ny tanàna. Raha ny marina dia atao hoe : ” ny làlambe tsara indrindra” maneran-tany ny Gonçalo de Carvalho ao Porto Alegre.
Ny 6 Febroary, ny Mpanolotsain'ny Tànana dia nanao hetsika nahatezitra, tamin'ny nanjeràny hazo miisa 115 teo amin'ny Edvaldo Pereira Paiva Avenue (araben'i Edvaldo Pereira Paiva), teo anelanelan'ny Toby Famokarana herinaratra Gasômetro manana ny tantarany (Tranon-kolontsaina ankehitriny) sy ny Araben'ny Pinheiro Borda Flyover ao afovoan-tanàna.
Na dia izany aza, tsy tontosa hatramin'ny farany ilay drafitr'asa satria nisy antokonà mponina nanakana ny Departemantan'ny Tontolo Iainana ao amin'ny Mpanolotsainan'ny Tanàna (Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SMAM) [pt] tamin'ny alàlan'ny fiakarana teny ambonin'ireo hazo sisa manoloana ilay toby famokarana herinaratra.
Soratan'i @zecaleal [pt] ao amin'ny Twitter : ” simban'ny fanapahana hazo tsy misy fanaraha-maso ny Gasômetro … Eso sy tsy firaharahàna no avy amin'ny Ministeran'ny tontolo iainana “.
Ampahan'ny asa fanitarana ny Edvaldo Pereira Paiva Avenue, tetikasa iray ho an'ny fiadiana ny amboara eran-tany 2014, ny fanjeràna ireo hazo zato taona.Tetikasa natao hanitàrana ny làlana eo anelanelan'ny Toby Famokarana herinaratra Gasômetro sy ny Pinheiro Borda Avenue ho 5,8 km io tetikasa io araka ny Masoivoho Mikarakara ny Fifamoivoizana sy ny Fitaterana (Empresa Pública de Transporte Circulação – EPTC).
Nandefa sary mampiseho ireo hazo manamorona ny arabe i Dudupruvinelli1 [pt] ao amin'ny YouTube :
Maherin'ny 22,5 tapitrisa reais (11,1 tapitrisa dolara amerikana) ny sandan'io tetikasa fanitaran-dàlana Edvaldo Pereira Paiva io, araka ny nolazain'ny Mpanolotsainan'ny Cup Transparency Portal [pt].
Mihetsika ny vondron'olon-tsotra
Tamin'ny fandrenesana ny fepetra noraisina, dia nisy antokonà mpanohitra ao amin'ny Mpanolotsain'ny Tànana nampiantso fivoriana niarahana tamin'ny SMAM tamin'ny alàlan'ny Komitin'ny Fahasalamana sy ny Tontolo Iainana. Nanome baiko ny hanajanonana ny fanjeràna hazo i José Fortunati Ben'ny Tanàna nony hariva. Na dia izany aza, dia nanao fanambaràna mampiady hevitra ity olom-boafidy fa ” tsy misy afaka mampiasa ireo hazon'ny Gasômetro ireo “, andalana izay noesoesoina ato amin'ity Youtube tonpoa ity [pt]:
Nisy fotoana azon'ny rehetra natrehana natao tao amin'ny Biraon'ny mpampanoa lalàna ny 19 Febroary. Nanontany ny mpitantana ny tanàna ny vondron'olon-tsotra sy ireo mpamolavola momba ny ahazoana manamboatra làlana any amin'ny toerana misy hazo mba tsy hanapahana azy ireny, tolo-kevitra izay notsipahan'ny EPTC ” noho ny fidangan'ny sarany sy ny mety hisian'ny tondra-drano be ao amin'ny [farihy] Guaíba”.
Notaterin'ny vavahadin-tserasera Sul 21 fa tokony hisy vinavina hamboly ” hazo 400 ao an-tanàna”, isa izay nampakarin'ny Mpanolotsaina iray volana tato aoriana nandritra ny fivoriana azon'ny rehetra natrehana tao amin'ny Lapàn'ny Tànana tamin'ny 18 Martsa. Nisy fambolen-kazo nokarakaraina tao amin'ny Kianjan'i Harmony, akaikin'ny Gasômetro, ny 23 Martsa, araka ny voarakitra ao amin'ny bilaogin'i Porto Imagem [pt – ny rohy rehetra] :
Raha atambatra, ho fanonerana ny fanjerana hazo 115, dia zana-kazo 401 no nomanina ho tsy maintsy volena, fanampin'ny tetikasa hanamaitso sy hanatsara ny tontolon'ny arabe, izay tokony hisy hazo maherin'ny 2.000 manamorona ny fanitàrana. Zana-kazo avy ao an-toerana no volen'ny Mpanolotsaina, mofanohitra amin'ny ankamaroan'ireo izay nesorina, izay sokajiana ara-teknika ho hazo vahiny sy mahery mitombo.
Ao amin'ny bilaoginy Rendering Freedom, nohadihadian'i Anthony Ling, mpanao maritrano (architecte) sy mpandrindra tanàn-dehibe (urbaniste) ny “drafitr'asan'ny Mpanolotsaina ho an'ny Fiadiana ny Amboara Eran-tany, (…) hetsika tselika iray feno raharaha mifanohitra sy mampiahiahy ao amin'ny fitantanana raharaham-bahoaka” [pt – ny rohy rehetra]. Mandinika ny fitaran'ny tanàna i Ling ary manontany tena raha ” hiakatra hifanahantsahana amin'ny fitombon'ny hafainganam-pandehan'ny fifamoivoizana fiara eny an-dàlana ny hatsaran'ny tanàna”. Etsy andanin'izany, na dia manohitra io tetikasa io aza izy, dia tsikerain'i Ling ny tanjon'ireo hetsi-panoherana samihafa izay zarazarain'ny fiarovana ny tontolo maitso sy ny fampiasana ny volam-bahoaka :
Ny olana misy eo amin'ny adihevitra momba ny “hazo” sy ny “fivoarana”, na dia izany aza, dia mirona mankany amin'ny fomba fijery mivilana ny tena olàna ilay izy. Tsy nitondra nankany amin'ny fivoarana ny vokatry ny asan'ireo vondrona, ary na ny fanoheran'ireo tsy nankasitraka ilay asa aza dia tsy misy dikany ho an'ireo hazo eo an-toerana ireo.
Ho fanoherana ny ataony hoe : “drafitra mankany amin'ny ‘farany'” dia nanolo-kevitra ny ” hanalefahana ny lalàna misy amin'izao fotoana izao ” i Ling mba ho handrisihana ny fampiasana tsara ny moron'i Guaíba :
…Tsy hamboarina ho toerana handalovan'ny fiara fa ho toerana ilaina, izay mendrika atao hoe morona mahafinaritra. Tsy misy ifandraisana amin'ny fanovàna na ny maha-hazo azy ny tsikerako, fa momba ny ‘fikorontanan'ny’ fandehan'ny asa, amin'ny fitazonana ireo faneriterena ankehitriny tsy hiatrehana fitakiana ara-tsosialy na avy amin'ny tsena.
Ny Kianjan'i Gasômetro
Ambaran'ny sary: “ny fiarovana sy ny fambolena hazo dia mety hitondra fahasamihafàna goavana eo amin'ny tontolon'ny tanàn-dehibe “. Sary avy amin'i Kênia Castro, ao amin'ny Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
Nandritra ny fivoriana niarahana tamin'ny mpanolotsaina nialoha ilay fivoriana azon'ny rehetra natrehana tao amin'ny Lapan'ny tanàna ny 18 Martsa, Jacqueline Sanchotene, filohan'ny hetsiky ny mpomba ny Gasômetro Movimento Viva Gasômetro [pt], nametraka ilay tetikasa ” hamorona ny Kianja Mitandavan'i Gasômetro”, notarihan'ilay mpahay maritrano, Rogério Dal Molin,tamin'ny 2007 izay mety hifanjevo amin'ny drafitry ny Mpanolotsaina amin'izao fotoana izao. Amin'ny soso-kevitra hampidinana ny làlana sy hanitarana ireo kianja dia tsinjo fa hifandray ny Kianjan'i Gasômetro sy ny moron'i Guaíba,” hanome làla-manitsy ho an'ny vahoaka mankany amin'ny Toby Famokarana herinaratra Gasômetro “.
Araka ny efa voafaritra tao amin'ny Drafitra Fototra tamin'ny 22 Jolay 2010, ao amin'ny tovan-dalàna 646, dia hampitohy ny Kianja Julio Mesquita sy Brigadeiro Sampaio ilay sehatra maitso, ho fanampin'ny Toby Famokarana herinaratra Gasômetro sy Mauá Wharf, izay manana tetikasa eo an-dàlam-panavaozana ihany koa. Kanefa, ambaran'ny lalàna fa tokony ho vita ao anatin'ny 18 volana io tetikasa io- nanomboka tamin'ny Janoary 2012. Nefa hatramin'izao, na ny tetikasa, na ny lalàna manokana hifehy izany dia mbola tsy misy voatolotra.
Tamin'ny fiafaran'ny fivoriana ho an'ny rehetra dia niteny ny Mpanampy ny Ben'ny Tanàna, i Sebastião Melo, fa hitohy indray izy io, satria efa vita ny fifanarahana asa, na dia teo aza ireo fanakanana maro tamin'ny fanjerana hazo.
Na dia izany aza, nampanantena izy fa hamorona vondrona mpandinika asa ho amin'ny fametrahana Kianja Gasômetro, izay voatsangana ny 20 Martsa ary misy ny solontena avy amin'ireo vondron'olon-tsotra dimy izay mandrafitra ny Komity Monisipaly ho Fampandrosoana ny Renivohitra sy ny Tontolo Iainana (Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental – CMDUA): ny Fikambanana Fiarovana ny Tontolo Iainana ao Rio Grande do Sul (Associação Gaúcha de Proteção ao Meio Ambiente – AGAPAN), ny Fivondronan'ireo Breziliana Mpahay maritrano (IAB-RS), ny Fivondronan'ireo Fikambanan'ny Mponin'i Porto Alegre (União das Associações de Moradores de Porto Alegre – Uampa) ary Fandrindrana Ankapobeny ny Faritra 1 (Região Geral de Planejamento 1 – RP 1) [pt – ny rohy rehetra ].
Na dia eo aza ny sehatra, dia mbola malahelo noho ny fanapahana ny hazo ihany ny mponin'i Porto Alegre.
Mampiasa ny tenifototra #SOSArvoresPOA ao amin'ny Twitter ny mponina hanehoany ny hatezerany, toa an'i Cintia Barenho (@CintiaBarenho) izay nanambara fa ” tahaka ny tsy maintsy hihanika azy ireny sy hiaro azy ireny indray isika”, sy Leonardo Frota (@leonardo_frota1, pt- ny rohy rehetra ) izay nanoratra hoe :
Mampalahelo ny fihetsiky ny Mpanolotsain'ny Tànanan'i Porto Alegre (@prefeitura_poa) sy ny Mpanampy ny Ben'ny Tànana @sebastiaomelo amin'ny fanohizana ny fanapahana ny hazo any amin'ny faritr'i Gasômetro [pt – ny rohy rehetra ].
Misy fanangonan-tsonia anaty aterineto [pt] noforonina mba ‘hampiatoana ny fanapahana hazo sy ho fankatoavana ny Kianja Gasômetro” ary nahangona sonia maherin'ny 1.200 tamin'ny 25 Martsa.
Vakio ny tantara farany nosoratanay momba ireo fanorenana ho an'ny Fiadiana ny Tompon-daka Eran-tany 2014 any Brezila :
05 Mar, 2013 – Dihy Kanivaly Samba Mandritra ny Mondialy Ao Brezila
01 Mar, 2013 -Fianakaviana Breziliana Very Trano Noho Ny Fiadiana Ny Ho Tompondakan'ny Baolina Kitra
07 Dec, 2012 – Fuleco, Biby Famantarana Fifaninanan-Dalao Mampisara-tSaina an'i Brezila
Soratra miverina: Uma Vergonha para Porto Alegre 2 | Luizmuller's Blog
[…] · Brezila : Miatrika Famaky Ny Hazo Tranainy […]
30 Mey 2013, 03:44